नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनसनरत डा. गोविन्द केसीसंग वार्ता गर्न सकिने बताएका छन् । यद्यपि दुवै जनाले डा. केसीलाई अन्तैबाट परिचालित भएको भन्ने भने छुट्टाएनन् । दुवै नेताहरु सोमबार पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा सहभागी थिए ।
डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेको २३ दिन नाघिसकेको छ । केसी समर्थक र प्रतिपक्षी पार्टीले सडक तताइरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर अवरोध आउने स्थिति बनेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक ११ गतेसम्मका लागि रोकिएको छ । तर केसीका मागको विषयमा ठोस छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
२३ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य गम्भीर भए पनि स्थिर छ । सरकारले जुम्लाबाट आफूलाई अपहरण शैलीमा ल्याएको भन्दै केसीले राजधानी आएदेखि नै स्वास्थ्य जाँच गराउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
केसी समर्थकद्वारा प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरुलाई एसएमएस र टेलिफोन
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा वसन्तपुर डबलीमा सुरु भएको सामूहिक सत्याग्रहका सहभागीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरुलाई टेलिफोन तथा एसएमएस गरी ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
डा. केसीको समर्थनमा वसन्तपुरमा सामुहिक सत्याग्रह
केसीको समर्थनमा ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स’ को आयोजनामा आइतबार बिहान वसन्तपुर डबलीमा आमनागरिकको सहभागितामा सामूहिक सत्याग्रह सुरु भएको छ । सत्याग्रहमा अधिवक्ता अाेमप्रकाश अर्याल, कृष्ण पहाडी लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरुकफ पनि सहभागिता रहेको अायोजकले बताएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि अनसरनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको मागलाई तत्काल पुरा गर्न तथा सरकारबाट भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न यहाँका नेपालीले माग गरेका छन् ।
केसीको पक्षमा प्रबुद्ध समुदाय
डा. गोविन्द केसी अनशनको २२ औं दिन शनिबार राजधानीमा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले उनका मागको समर्थनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्स’ को आह्वानमा माइतीघर मण्डलाबाट जुलुस निकाली नयाँ बानेश्वरमा कोणसभा गरियो ।
परिक्षणको अनुमति नपाउँदा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकहरु अन्योलमा
प्रा.डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन शनिबार २२ औं दिन पुग्दा उनको स्वास्थ्य स्थिति यकिन हुन सकेको छैन । केसीले स्वास्थ्य परीक्षण नगराउने अडान लिएका छन् । उनको स्वास्थ्य स्थिति दिनहुँ थप जटिल बनिरहेको हुनसक्ने चिकित्सकले अनुमान गरेका छन् ।
एलपी देवकोटाकलेन्द्र सेजुवाल
जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोबिन्द केसी काठमाडौं आउन तयार भएका छन् । उनले आफ्ना सहयोगी र लिनका लागि राजधानीबाट गएको टोलीसँग काठमाडौं जान सहमत भएको जनाएका हुन् ।
डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग भईरहेको वार्तालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन तुरन्त चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गरेर पूर्ण म्यान्डेटसहितको वार्ता टोली पठाउन आग्रह गरेका छन् ।
जुम्लामा १८ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे मंगलबार पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेन । सरकारी टोलीले पहिला डा.केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अडान राखेपछि मागमा छलफलै हुन नसकेको डा. केसीका प्रतिनिधिले बताए । सोमबार र मंगलबारको अनौपचारिक वार्तापछि सरकार पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्यहरूले आफूले दिएको प्रतिवेदनको भावना र मर्मअनुसार कानुन बनाए अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमतिको विन्दु पहिलिने बताएका छन् ।
डा. केसी अनशन : औपचारिक वार्ता हुन सकेन
जुम्लामा १८ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागका विषयमा मंगलबार पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेन । सरकारी टोलीले पहिला डा.केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अडान राखेपछि मागका विषयमा छलफल हुन नसकेको डा. केसीका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
कसैको दबाबमा सरकारले निर्णय गर्दैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारविरुद्ध अफवाह फेलाइएको भन्दै प्रतिवाद गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा मंगलबार पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधरणसँग भेटघाट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।
जुम्लामा अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै कर्णाली प्रदेशका चिकित्सकले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका जुम्ला र सुर्खेत शाखाले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने जनाएका छन् ।
डा. गोविन्द केसी जुम्लामा पुगेर अनशन सुरु गर्नेबित्तिकै एउटा पदावली एकाएक चर्चामा आयो, मार्सी चामलको भात । जुम्लामा पाइने यो चामल अनशन बसेका सत्याग्रही केसीले खाने कुरै थिएन । बरु यो खैरो चामलको भात पाकेको थियो, झापाको प्रस्तावित मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको चुलोमा । अनि त्यो खान पुगेका थिए, नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।